ह्याकिङको हल्लाले बैंकिङ क्षेत्र हल्लिएपछि विज्ञको सुझाव- खतरामुक्त बनाउन 'पेन टेस्टिङ' गर्नुपर्छ
केही वर्षअघि एनआइसी एसिया बैंकमा लक्ष्मी पूजाको दिन स्विफ्ट ह्याकिङ भएर पैसा चोरी भएको थियो। नेपाल प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा सो बैंकमा सबै कर्मचारीहरुले एउटै इमेल प्रयोग गर्ने गरेको र सोही कारण पनि बैंकमा ह्याक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
निक्षेपको तुलनामा १३ प्रतिशत बढ्यो कर्जा, ऋण नै तिर्न लगिएको आशंका
गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढेको छ। निक्षेपको तुलनामा कर्जा १ खर्ब ४ अर्ब अर्थात् १२.७१ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको हो।
मैले जन्मँदै कर्नेल उपाधि पाएको हुँ। म पनि देशको प्रधानमन्त्री बन्ने रोलक्रममै थिएँ। म प्रजातन्त्र र राजाका पक्षमा रहेको जानकारी तत्कालीन युवराज महेन्द्रलाई राम्रोसँग थियो।
ओली सरकारको बजेटलाई 'प्रतिगमन' भनेका दलको सरकार बनेसँगै आउला नयाँ बजेट?
पौडेलपछि मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टैदेखि नयाँ बजेटका विषयमा सल्लाह गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि नयाँ बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
७ अर्बभन्दा बढीको एनबी बैंकको सेयरमा चौधरी ग्रुपको नजर, नबिललाई बलियो बनाइराख्ने यस्तो योजना
एनबी बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार चौधरी ग्रुपले आईएफआईसीको सेयर प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँको हाराहारीमा किन्न सक्नेछ।
चौधरी ग्रुपले सेयर खरिदमा 'बेइमानी' गरेपछि बैंकलाई सम्राट सिमेन्टको पत्र
सम्राट सिमेन्ट उद्योगमा सिटिजन्स इनटरनेसनल बैंकले लगानीका लागि ‘लिड’ गरिरहेको छ। सेयर किनेको रकम तिर्ने अवधि ६० दिन कटिसक्दा पनि खरिदकर्ताबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले आफूहरु बाध्य भएर खाता तथा कारोबार रोक्का गर्न बाध्य भएको एक लगानीकर्ताले जानकारी दिए।
अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरुले यातायात, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रमा बढी प्रभाव परेको भन्दै राहत दिइरहेका छन्। हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर निर्माण, यातायात र पर्यटन क्षेत्रमा राहतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
८०५ प्रतिशतले बढ्यो असारे खर्च, एकै दिन १४ अर्ब रुपैयाँसम्म
आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासमा ३०–३० र चौथो त्रैमासमा २० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने प्रावधान भए पनि सरकारको खर्चको प्रवृत्ति भने असारमा एकमुष्ट गर्ने परम्परा छ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष खत्री भन्छन्, ‘कोषले ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन सक्दैन। ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बैंकबाट ६ प्रतिशत ब्याज दिने कोषमा रकम जम्मा गर्दा कर्मचारीलाई कसरी फाइदा पुग्छ? यही विषय हो हामीले उठाएको।’
मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा 'बिग मर्जर', वाणिज्य बैंकको संख्या १५ मा झार्ने लक्ष्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या बढीमा १५ वटामा सीमित गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्जर’ लाई विशेष प्राथमिकता दिएर वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो।
बढ्यो वित्तीय जोखिम, बैंकको निक्षेपभन्दा कर्जा दोब्बर
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह ४७.८५ प्रतिशतले बढेको छ। नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह २ खर्ब ३९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बढी छ।
बजारमा तरलता अभाव, राष्ट्र बैंक भन्छ- सिस्टममा २७ अर्ब मात्र छ
बजारमा कर्जाको माग बढ्दै गएको तर सोही अनुपातमा निक्षेप नबढ्दा तरलता अभाव देखिन थालेको हो। निक्षेपको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्समा १९ प्रतिशतले वृद्धि भएपनि सरकारको खर्चमा कमी हुँदा तरलता अभाव हुन थालेको हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले आगामी आवका लागि ५१ अर्ब रुपैयाँ पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र लाभ हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा, रोजगारी, कृषि र सहकारी क्षेत्रमा छुट्याइएको भने पनि यी कार्यक्रम नितान्त कार्यकर्तामुखी छन्।
स्टक मार्केटजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विज्ञप्ति निकालेर कम्पनीहरुको नाम किटान गर्न नहुने नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन्। चलखेल भएका ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्नु बोर्डको 'अपरिपक्वता',
विनियमावली टेकेर नेपाल भित्रिँदैछ विदेशको अवैध रकम!
विनियमावली नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण पहल भएको दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीको वातावरण बनाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन विनियमावली ‘गेमचेन्जर’ नै रहेको दाबी गरेका छन्।
सेयर बजार हौसिँदा दुर्घटनाको चिन्ता
कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र त्यसका कारण जारी गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरु ओरालो लागिरहेका बेला अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा चिनिने सेयर बजार भने लगातार उकालो लागिरहेको छ।